Madaxwayne Muse Waxen Leenahay Meeyan Leaderskaa Keentay, Raacayaal Uun Loma Baahnee?
Saturday September 12, 2020 - 10:05:45 in Articles by Hadhwanaag News
W/Q: Maxamed Dhamac
Bismilaahi Rahmani Raxiim!
Waxay shalay tariikhdu ahyayd 11 september 2020. Waxaa ognahay malinta 11 september yeelatay xusid maraykan dadkii ku dhintay 2001 diyaaradihii duqeeyay World trade center ee 4 meelood ugu tala galeen afduubayaashii af duubay diyaradahaa.
Shalay Madaxwayne Trump iyo Musharax Joe Biden booqday meelaha diyaaraduhuu galeen.
Hadaan markaa ka gudbo malintaa.
Weegii la soo dhaafay bilicsanaynaa. Abwaan Xasan Dhuxul. Waxa u tiriyay gabay dareenka shacabka ka turjumaya. Isagoo han iyo hiigsi tilmaamaya. Imisaan soo qoray, waaxaan markaste imado dalkayga ku daalay erayadda. Curdinbaynu nahay, waynu gaadhi, ficilkii ma jiro.
Soo saar iskaba daaye, hadii sharciyadda u hogaansami layn sida tusaale, sharciga trafikska amaba gaadidka ugu fudud in la raaco kana lama raaco. Kuwa qurbe ka yimid wadadda dhex istaaga macal. Iskaba daa buss ka baxa waddadda. Si kaste mayoro fiican iyo dalka la is yidhaa badala mid bilic iyo midkale. ”Shacabka u baahan inay is badalaan” waxkaste ha noqotee.
Watan hore u idhi, dhalinyarooy. "Dhal dhalaal aad social media ka aragtay ha rumaysane. Bartan ka samayn Somaliland ee Walal ha tahriibine oo Hooyo wadnaha ha goyn.”
Markaa hadaan hore uga socda soo bandhiga gabaygaa oo qiimo ku fadhiyay. Abwaanka waxa leenahay bulsho uun dareenkooda kamaad turjumin malaha sidii dalka jaarka nahay alaye raxmee Sado Cali xilibaanka u noqotay isku wada. Haday dhab kaa tahay, wanigii hore u qoray wuu raba musharax go for it.
"Waxaa idin sheegayaa, afmishaar, aftahan, hal abuur iyo haldoorba, buuxbaa ka nahay. Waxa u bahanay. Dad ficil leh, shaqo kaste”
igama aha qoraalka Abwaanka dhaliil. Gabaygisu samayn uun muu yeelan. Tariikhdu galay Mansha Allah.
Hadaba u soo noqdo, sawirka xagan ku wado Kumiye. "Horta Kulmiye isaga hore dadka u abtiriyay” imika kala jab uun mahee. Xusbiga kaliya u arka ee Muse manta ka guulaysan lahaa waa Udub. "Udub dawlad cidkaste leh bay ahayd oo dawladnimadda taqaanay”
Musuq badan dalka la is laha ka sameeya, waxaan maqlay waxa badbadisay rag xisaabiya Udub ahaa. Allahu aclam.
Horta anuu speechkan waan ku hambalyaynayaa Maxamuud Hashi.
Qabyaaladdu uun mahee qabiilku waa qudhun. Yaa diiday, waayo cidkaste family amaba reer buu leeyahay is waydii ina reer hebel wax ku qabtay oo mustaqbalkaga ay ka arimiyeen. Lakiin aduu codka waa kula carartaa.
Maxamud Hashi. Waxa tusaale ugu soo qadanayaa, magaladda yar daganahay ee Göteborg/Guthenburg, Sweden ayaa jaaliyadd sharaf leh oo Sweden daladeedda macal Göteborg lagu dortay ka jiri jirtay. Jaaliyaddii qabiil noqotay. Reer kamidda lagu yidhi jaaliyadda hadaa reer hebel tihiin anaga samaynay. Wayahay dadbaa soo tahriibay kuwaa soo tahriibay. Waxba ma fahansana bilowga wayo. Jaaliyadda lacag laguma cunee. Waa urur loogu tala galay community u adeego.
Aniga dhowr kala samaynay urur u adeega shacabka ka dheerayay jaliyadda reer hebel sameeyen.
Markaa runta ka hadalno, waxba la isku qarinayn. Maxamud Hashi, hadii meesha sii afduubantay waa ku saxsanyay. Waayo waxaan tusaale ugu soo qadanayaa xagan. Anoo 33 jir imid meel afduuban imid. Dhlibyaradii magaladda Guthenburg daganaa yidhahdeen. Maxamed Dhamac rabnaa gudoomiye jaaliyad waayo urur amaba jaaliyad sameeyen ka samayn badatay ka shaqo badatay tan soo jirtay.
Shirkaa maxaa ka dhacay, show laba nin 50 jir la tartamee iskaga daaye. Qabyaalad shirka soo qaban qabisay. Qabyaaalad gudi ka ahayd. Labada ila sharaxnaa mid baa fahmay yidhi. Waar anuu waxaan u tanaasulay Maxamed Dhamac ninkan kale. Show reerka ka soo jeeda ee la yidhaa H. Yonis, meesha waa ka maqnayeen. Kan yar noqotay sweden jogay dhowr labatan sano u fikarast sidii swedishka. Waa doorashadii swedishka ka shaqo fiican qabtay loo codayn mayee yaa meeshan ka ah statsvetare/dalka fahansan. Nacamtii si fiican sharciyaddan iyo dalkan u yaqana. Markaa baa jirtay kaa ila tartamay macal u turjumay. Wayay aduu waxa la igu yidhi Ina Dhamacow maxaad ugu yeedhi wayday H. Awal. "Waar anuu uma iman inay i doortan Habar heblaayee waxaan u imid in Somaliand I dorato”
Uf Qabyaaladdu inay uskag tahay, la igama badin laba cod uun ee. Qabyaaladdu tulooyinkii magaladda Guthenburg u dhawa ka timid.
Markaa xusbi Kulmiye waxaan leeyahay idinka JEEGAAN, GIRAAN u bixiyay qabyaaladdii. Waxanay u egtahay in Waddani guulaysan next election anuu Madaxwayne Faisal Cali Waraabe in mar Madaxwayne la tiyaabiyo jeclan lahaa. Waxa Faisal muujiyey, tii Siraanyo muujiyey. Hogaamiye dhabta ahi. Raacayaal kale ma keene waxa u keena amab taba bara abuura hogaamiyeyaal kale. "True leaders they done create followers, they create leaders”
Dhalinyaro iyo dumar Somaliland samayn ku yeesha badan way imani. Waayo codkasi waa more then 2 millions. Qurbaha dumar iyo dhalinyaro taliya westerns countries amaba reer galbeedka wadamoodda, waad la socotaan.
Lakiin kursigii Imika waa la jecladay. Macal wadamaddaa Africa ku caan ahayde.
Yaan lala yaabin dada musharaxa tariikhda inanyar 47 jir madow Madaxwayne noqday oo Barack Obama la yidhaa uun mahee. Waa markii dhici karto 76 jir Joa Biden noqdo Madaxwayne. Trump waba dhaafay 70 jir sida mudane Madaxwayne Muse Biihi. The revolution will come one day.!
— W/Q: Maxamed Dhamac